Al-shabaab oo Mar kale loogu Baaqay in Ay Daacish ku Biirto – Radio Daljir
Oktoobar 4, 2015 5:55 b 0
Axad, Oktoobar 04, 2015 (Daljir) —Kooxda la magac baxday Khilaafada Islaamka ee Dacish ayaa ka ugu yeertay Xarakada Al-shabaab ee Soomaaliya in ay ku biirto kooxda ayna adeecaan hogaamiyaha Dacish Abu Bakar Al-bagdadi.
Xafiisyada Warbahinta kala duwan ee Kooxda Dacish ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa ay sii daynaayen Muuqalo dhamaantooda ku socda Xarakada Al-shabaab.
Muqaladaasi aya laga sii daayay xafisyada Kooxdaasi ee gobolka Sinay ee dalka Masar,Raqa oo Suuriya ah iyo Furaat oo Iraq iyo Xadra Mout oo Yemen ah,dhamaantooda waxa ay fariintooda ugu magac dareen “Xaqa Kolonyada” iyo dhageyso muhaajidka ka dagaalamaya Somalia.
Hal fariin ayay sideen Muqaaladaasi haba kala duwanaadaan dadka hadlaayay,mid kamid ah dadkii muuqalka kasoo muuqday oo waji xirnaa ayaa sheegay in kooxdooda iyo dhaq dhaqaaqyadooda kala duwan ee caalamka ay ugu baqaayan Xarakada Al-shabaab in ay a midooban Khilaafada Islaamka.
Xarakada Al-shabab ayaa xusid mudan in horey ula bahoowday ururka Al-qacaida oo dhowr dhinac ku khilafsan kooxda Daacish waxaana Alshabaab bayaan ay soo saareen usbuucii la soo dhaafay ay ku sheegeen inay ku adkaysanayaan kamid ahaanshaha urur weynaha alqaacida .
Baaqan kasoo yeeray Dacish ayaa imaanaya iyadoo Al-shabab ay tiro dhowr ah oo dagaalamayaashedi ajaanibta ay u xirtay markii ay ka hadleen suurta galnimada in ay ku biiraan Dacish.